ကင္ဆာမျဖစ္ေအာင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးမယ္႔ ကင္ဆာကိုသတ္တဲ့အရြက္ – Popinvdo
မိတ်ဆွေတွေသူငယ်ချင်းတွေ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တချိုသော မိသားစုဝင်တွေဟာ ကင်ဆာတွေဖြစ်နေကြတယ်လို ့ခပ်စိတ်စိတ်ကြားလာရတာများတော့ကင်ဆာလူနာတွေရဲ ့ကျနး်မာရေးအတွက် တစိတ်တပိုင်းအထောက်ကူဖြစ်တဲ့ တင်ပြီးသားပို့စ်ကို ပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီထဲမှာ သင်္ဘောရွက်ကိုကိုယ်တိုင်အခြောက်လှန်းပြိး ကြိပ်ထားပုံကိုလည်းပြပေးထားပါတယ် ။
နေရောင်မှာ ၄ရက်လောက်လှန်းထားရင်အရွက်တွေကတော့ခြောက်သွားပါတယ်။လူနာတွေအတွက် အစာသိတ်မခြေနိုင်ရင်အရွက်တွေကိုသောက်မဲ့အစား အမှုန့်ကို ၁၀မိနစ်လောက်ရေနွေးနဲ့စိမ်သောက်လိုက်တော့ အဆင်ပြေမယ် လို ့ယူဆလို ့ပါ ။အာနိသင်အားလုံးလည်း ရသွားနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ အရွက်မှာပါတဲ့ ပိုးမွှားလည်းသေသွားနိုင်ပါတယ် ။
နေလှန်းပြီးရင် အရွက်တွေကို သီးခြားချွေပါ သီးခြားကြိပ်ပါ အတူတူမကြိပ်ပါနဲ့ ။အရိုးအတံကိုသပ်သပ်ထားပါ။ သပ်သပ်ကြိပ်ပါ ။အရိုးတံတွေက ခြောက်ဖို့အချိန်ကြာနိုင်တာမို့ရောကြိပ်လိုက်၇င် စိုထိုင်းမူ ့ကြောင့်မှိုတက်နိုင်ပါတယ် ။သင်္ဘောရွက်ဟာကင်ဆာရောဂါပိုးကိုသတ်နိုင်တယ်လို ့ဗီယက်နမ်ကတိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးကဆိုပါတယ် အူကင်ဆာဖြစ်နေသူတွေကို စမ်း်သပ်ပြီးတိုက်ခဲ့ရာမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တာတွေ ့ရတယ်လို ့ဆိုပါတယ်။
ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းရဲ ့စာအုပ်တွေမှာလည်း ကင်ဆာသမားတွေအတွက် ညွန်းထားတဲ့ အရွက်တွေထဲမှာ သင်္ဘောရွက်ပါဝင်ပါတယ် ။မိမိတို ့ရဲ ့လက်လှမ်းမှီရာမှာ သင်္ဘောရွက်တွေကို အလွယ်တကူရှာတွေ ့နိုင်သလို ကင်ဆာမဖြစ်သေးရင်တောင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သောက်သင့်တာပါ ။
ဘာကြောင့်ကြိုတင်သောက်သင့်သလဲဆိုတော့ !!!ပြုပြင်ပြီး အစားအသောက်များ( Processed Food ) ပြုပြင်ပြီးအသားများ( Processed meat )ဝက်အူချောင်း ကြက်အူချောင်းလို အစားအသောက်များ ရယ်ဒီမိတ် အသင့်ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်များမှိုတက်နေမှန်းမသိတဲ့အစားအသောက်များ ဒီတ်လွန်နေတဲ့အစားအသောက်များ ။
ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းထားတဲ့အစားအသောက်များ အရွက်အသီးများ တာရှည်ခံဆေးများထည့်ထားတဲ့အကြော်အလှော်အစားအသောက်များဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအသောက်များကို မြန်မာပြည်သူလူထုအတော်များများက ကင်းလို ့ရမယ်မထင်ပါ ဒီအတွက် သောက်ထားသင့်တယ်လို ့အကြံပြုပါရစေ။
( ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းကတော့ ၉၀ % ကနေ ၉၅ % သောကင်ဆာတွေဟာ အစားအသောက် အနေအထိုင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်လာရတယ်လို ့ဆိုထားပါတယ် )ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းကတော့ လူတိုင်းမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆဲလ်တွေရှိတယ်လို ့ဆိုပါတယ် ခုခံအားကစဉ်ကလျားဖြစ်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းဟာကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ကြတာပါ ။
ခန္တာကိုယ်ရဲ ့ခုခံအား ၈၀ရာခိုင်နှုံးဟာ အူမကျန်းမာရာကနေ ရောဂါအားလုံးဝင်နိုင်တယ်လို ့ခေတ်မှီဆေးပညာရှင်တွေကလည်းဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကော ကင်ဆာဖြစ်နေသူတွေရောသောက်သင့်တာပါ ။
သင်္ဘောရွက်သောက်ခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ !!!(ဘယ်လိုသောက်သင့်လဲလို ့မေးမြန်းလာသူတွေအတွက်ပါ)
(၁)သင်္ဘောရွက်အစိမ်း တွေကို ကြိပ်ပြီးတော့လည်းအရည်ကိုသောက်နိုင်ပါတယ် ။
အဲဒါကတော့ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အစိမ်းအရည်ကို သောက်ရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်လို ့ဆိုထားပါတယ် ။
(၂) သင်္ဘောရွက်ကိုပြုတ်ပြီးလည်း သောက်နိုင်ပါတယ် ။ သင်္ဘောရွက်အရိုးတံတွေကိုပါပြုတ်တဲ့အခါ ထည့်ပြုတ်ပါ ။သူကထွက်လာတဲ့အစေးတွေကလည်း ဆေးဘက်ဝင်ပါတယ် ။
(၃) သင်္ဘောရွက်ကို အခြောက်လှန်းပြီး လဘက်ခြောက်လို ရေနွေးပူပူမှာထည့်ပြိီးတော့လည်းသောက်နိုင်ပါတယ် ။
(၄) သင်္ဘောရွက်နုနုကို တို ့စရာလို ့ရေနွေးစိမ်ပြိးတော့လည်း ထမင်းနဲ့အတူစားလို ့ရပါတယ် ။
(၆) သင်္ဘောရွက်အဖူးတွေအပွင့်တွေကိုလည်းသုတ်စားတာကောတို ့စားတာကော အသုံးပြုလို ့ရပါတယ် ။
(၇)သင်္ဘောအစေ့တွေကိုလည်း တနေမှာ လေးငါး စေ့ခန့်လည်း ဝါးစားတာ သို ့)ကြိပ်တဲ့အထဲမှာ ထည့်ပြိး စာသုံးနိုင်ပါတယ် ။
(၈) အစာမစားခင်ဖြစ်ဖြစ် အစာစားပြိီးဖြစ်ဖြစ်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ် ။မိမိအဆင်ပြေသလို သောက်နိုင်ပါတယ် ။
သင်္ဘောရွက်ဟာ ကင်ဆာအပြင် တခြားအစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအတွက် အစာချေစံနစ်ကောင်းမွန်တာအပါအဝင် ယားယံတဲ့အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အနာတွေ ကင်ဆာဘက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တခြားအဖုအကြိတ်အခဲတွေအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ကိုလက်စထရောတက်နေတာတွေကိုကျစေပါတယ် ။ သင်္ဘောရွက်ဟာ ရောဂါ အတော်များများအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ် ။သင်္ဘောရွက် သင်္ဘောသီး အပွင့် အမြစ် အားလုံး ဟာဆေးဘက်ဝင်လို ့ဆိုပါတယ် ။ သင်္ဘောရွက်မှာ antioxidants တွေပါဝင်ပါတယ် ။
ခန္တာကိုယ်မှာ အလုံး များ အကြိတ်များရှိတဲ့သူများ ကြိုတင်သောက်ထားပါ ။မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာပြီးရောဂါဘယများကင်းဝေးကြပါစေ။
Previous Article 2018 အတြင္း အဆဲခံရဆံုး ဆယ္လီမ်ား
Next Article ေငြကို ေရလိုသံုးၿပီ အလ်ွံအပယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ က်င့္စဥ္ ဂါထာေတာ္